I-China Batching Mixer System Yokukhiqiza neFektri UJusheng
I-Automaticaggregate Batching Umanyolo Wokuxuba
Umshini wokubhaka uyingxenye eyinhloko yesiteshi sokuxuba, esingahlukaniswa ngokuvamile sibe izindlela ezimbili: isilinganiso sokuqoqwa nesilinganiso ngasinye.
Ukulinganisa okuhlanganayo ngokuvamile kusebenzisa ukulawulwa kwesilinda ukukhipha izinto. Imitha yokuqoqeka yento ngayinye inembe kakhulu kunamamitha wangaphambilini wokukhipha ibhande. Izinto ezidingekayo zixutshwe kutolo elihambayo eliphansi le-flat ngemuva kokulinganisa okulandelanayo, bese kudluliswa kubhande elithambekele ngudlulisi webhande oyisicaba. Umshini noma ibhakede lokuphakamisa.
Ukulinganisa okuhlukile kusho ukuthi into ngayinye ilinganiswa ngokwehlukana nge-hopper enesisindo ehlukile. Lezi zinqubo zingenziwa ngasikhathi sinye, ukonga isikhathi sokulinganisa nokwenza inqubekela phambili yesilinganiso inembe kakhudlwana.
Umthamo nobungako besikhala sokugcina somshini wokubhaka kuklanyelwe ngokuya ngezidingo zabasebenzisi, ngokuvamile amabhakede ama-3-5 nezikwele / ibhakede elingu-8-40, ezingagcina izinhlobo ezahlukene zesihlabathi, isihlabathi namatshe.
Isakhiwo somshini wokubhaka singahle sakhiwe njengohlaka lomhlabathi olumsulwa, isakhiwo sendawo yokugcina impahla eyakhiwe ngomhlabathi noma isakhiwo esigcina umhlabathi esigcwele ngokuya ngezidingo zabasebenzisi. Ngenxa yokuphakama okulinganiselwe kokulayisha komlayishi, isakhiwo somhlabathi esimsulwa sidinga umsebenzisi ukuthi aphonse kuqala i-slope yokulayisha. Isakhiwo sesilo esingaphansi kwesigamu noma isakhiwo sesilo esigcwele phansi singagcina umthamo wokulayisha, kepha owokugcina unomgodi, ngakho-ke kudinga ukwenziwa Ukwenza ngcono ipayipi lomgodi, nokuqinisekisa umthamo wokudlulisa webhande elithambekele elihambayo, elihambayo lebhande elihamba phambili lidinga ukunwetshwa lapho i-engeli yokudlulisa ihlala ingashintshiwe, okwandisa izindleko zemishini.
imodeli cha. I-PLD800 PLD1200 Isilinganiso se-PLD1600 Umdumba PLD3600 PLD4800
umthamo wesisindo se-hopper (m³） 1 * 0.8 1 * 1.2 1x1.6 1x2.4 1x3.6 1x4.8
umthamo wesitoreji (m³) 3 * 4 3 * 8 4x10 4x10 4x14 4x16
ukunemba kwe-batching ± 2% ± 2% ± 2% ± 2% ± 2% ± 2%
ubukhulu obunesisindo (kg) 0 ~ 1000 0 ~ 1500 0 ~ 2500 0 ~ 3500 0 ~ 4500 0 ~ 6000
izinhlobo zezinto ezibonakalayo zokubhaka 2-3 2-3 4 4 4 4
isivinini sokuhambisa ibhande (m / s) 2 2 2 2 2 2
Umshini wokugoqa ukhonkolo we-PLD800 / PLD1200 uyimishini yokubhaka ezenzakalelayo esetshenziswa ngokuhlangana nomxube. Ingazigcwalisa ngokuzenzakalela izinqubo zokubethelwa kwezinhlobo ezimbili zokuqoqwa okufana nesihlabathi netshe ngokuya ngesilinganiso sikakhonkolo esethwe ngumsebenzisi. Lo mshini ungasetshenziswa ngokubambisana ne-JS500 kanye ne-JS750 mixers ukwakha isiteshi sokuxhuma ukhonkolo esilula. Kungumshini wokukhonkolo okhiqizwayo wamaphrojekthi wokwakha ezimbonini nawokwakha umphakathi, amasayithi wokwakha aphakathi nendawo namancane kanye nezimboni zezingxenye ze precast. Umshini wakhiwe ngendlela yokudla, uhlelo olunesisindo, uhlelo lokulawula ugesi, njll. Isici salo ukuthi indlela yokuphakela ihlelwe ngendlela "eyodwa", okuphakelayo kwe-Loader, indlela yokuphakela ukuphakelwa kwebhande lokuhambisa, ifomu elinesisindo yi-lever + inzwa, futhi isilinganiso sinembile.
1. Isisindo esiqondile, ukunemba okuphezulu kwesisindo; 2. Ukusebenza okuhle kakhulu kweseli yomthwalo, ukukala kunembile futhi kuzinzile; 3. Isakhiwo siphelele sinengqondo, siqinile futhi sihle; Ukuhanjiswa kuzinzile, futhi okubalulekile kunganikezwa ngokujwayelekile; 5. Kala izinhlobo ezi-2 zokuhlanganiswa ngasikhathi sinye, nesikhathi esifushane sokulinganisa nokusebenza kahle okuphezulu;
Umshini wokugoqa ukhonkolo we-PLD800 / PLD1200 ungahlanganiswa namamodeli ahambisanayo ukwakha izitshalo zokukhonkolo ezihlanganisiwe zamafomu nokucaciswa okuhlukile. Zisetshenziswa kakhulu kuzitshalo ze-HZS25 / HZS35 zokubhaka noma amasayithi amancane wokwakha.
Umshini wokugoqa ukhonkolo we-PLD1600 / 2400 / 3600/4800 unokucaca okuphezulu nokunemba okuphezulu. Idivayisi yokubhaka isebenzisa indlela yokudla yokuhambisa ibhande noma yokudla yokulayisha ukuze kuqinisekiswe ngempumelelo ukunemba kwesilinganiso sokuxuba usimende / isihlabathi / amatshe amatshe amancane noma izinhlobo ezingaphezu kwezintathu zesihlabathi namatshe amatshe. Amamodeli amakhulu yi-PLD1600 umshini wokubhaka we-warehouse emithathu, i-PLD1600 umshini wokubhaka wokugcina. Umshini wokukhonkolo kakhonkolo uyimishini ezenzekelayo esetshenziselwa ukusatshalaliswa kobuningi bezinto ezahlukahlukene ezifana nesihlabathi kanye namatshe. Kusetshenziswa kakhulu embonini yokwakha ukhonkolo ukufaka esikalini samapulatifomu ebhukwana noma ukulinganiswa kwevolumu. Inokunemba okuphezulu kokukala, ukusebenza kahle kokusabalalisa okuphezulu, kanye ne-automation. Izici ezithuthukisiwe zingenye yezingxenye eziyinhloko zesethi ephelele yemishini yesitshalo sokuxuba ukhonkolo esizenzekelayo. Ngokuthuthuka okuqhubekayo, umshini wokukhonkolo owenziwe ngokhonkolo usungule uchungechunge lomkhiqizo ochungechungeni, olunhlobonhlobo nolunezinhloso eziningi. Asetshenziswa kakhulu ku-HZS60 / HZS90 / HZS120 / HZS180 batching plant
Izici zobuchwepheshe zomshini wokukhonkolo owenziwe ngokhonkolo
• Isisindo esilinganayo nesikahle, ngokunemba okuphezulu kwesisindo;
• Layisha iseli ngokusebenza okuhle kakhulu, okunesisindo esinembile futhi esizinzile;
• Isakhiwo siphelele sinengqondo, siqinile futhi sihle;
• Ingakala izinhlobo ezi-3-5 zama-aggregates, ngesikhathi sokulinganisa esifushane nokusebenza kahle okuphezulu;
• Kunomshini okhuphula isikulufa ngomsila, ongalungisa ukungezwani kwebhande, okulula nokusheshayo;
• Ama-vibrator afakiwe ezindongeni eziseceleni komgqomo wesihlabathi nasesihlabathini esinebhakede ukuze kube lula ukukala nokuthula ..
Izingxenye Zokukhonkolo Ezihlanganisiwe, Isistimu Yokulinganisa Yokuhlanganisa Okuhlanganisiwe, Okuzenzakalelayo Aggregate Batching System, Okuzenzakalelayo Isilinganiso Batching Machine, Isistimu Yokuqoqa Okuhlanganisiwe, I-Automaticaggregate Batching Umanyolo Wokuxuba,